ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » လေးဦးအသုံးများသောဆက်ဆံရေးပြဿနာများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 15 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
မေတ္တာသည်ထိုသို့သောယုံကြည်နိုင်လောက်သောအရာဖြစ်၏! ဒါဟာကျနော်တို့တဦးတည်းကိုတွေ့ရှိဖို့ကြိုးစားနေတစ်ဝက်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသုံးစွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းင်. အကြှနျုပျတို့ပွုသောအခါမူကားကိုသာထက်ဝက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့ဆက်ဆံရေးအတွက်မည်သည့်လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာတွေရှိသည်ချည်နှောင်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ရင်ဆိုင်ရသောပြဿနာများကိုထိုသူအပေါင်းတို့လွန်းဘုံဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားရန်နည်းလမ်းများကိုရှိ၏. တစ်နေ့တာအဆုံးတွင်သင်သည်ဖက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဤပြဿနာများ၏အဘယ်သူမျှမသင်အတူတကွရှိသည်ထက်ပိုကြီးတဲ့မှန်လျှင်သင်အမှန်တကယ်အထူးတစ်ခုခုရှိသည်ကြောင်းသတိရပါ. ကမြဲမြဲမြံမြံဆုပ်ကိုင်ထားရန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်. ဒီနေရာမှာလူတွေဆက်ဆံရေးကိုရင်ဆိုင်ရနှင့်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့ကိုဖြေရှင်းရန်လေးဘုံပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်.
communication ဖြစ်နိုင်သည်ဟုလည်းမရှိအသုံးအများဆုံးသောဆက်ဆံရေးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်. လူနှစ်ဦးမဟုတ်သောလူမျိုး၏အလိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တူညီသောစာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိသည့်နေရာကိုတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်မထနိုင်မည့်ဤမျှလောက်များစွာသောကိစ္စများလည်းရှိ၏. သူတို့ကယ့်ကိုထက် communication အတားအဆီးများပိုကြီးပိုမိုရှုပ်ထွေးလာပြီမှအခြေအနေများကာကွယ်ပေးနိုင်မှကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်တားဆီး. သင်နှင့်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ဤအတားအဆီးများတည်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိလျှင်ဤကိုချဉ်းကပ်ဖို့လမ်းပွင့်လင်းနှင့်အတူရှိ၏, ရိုးဖြောင့်နဲ့ non-ဝေဖန်ပြစ်တင်နှလုံး. အဲဒီအခြေအနေတွေအတွက်လောင်စာထည့်သွင်းထားတဲ့မီးအများကြီးဇာတ်လမ်းတို့ကိုမိမိတို့ဘက်ခြမ်းကိုနားထောင်ပြီးမရှိဘဲလူတစ်ဦး၏တရားစီရင်ချက်ချမှတ်လူနှစ်ဦးနှင့်နောက်ဆက်တွဲပြသနာအကြားနားလည်မှုမရှိခြင်းတို့ထံမှလာ. ထိုင်စကားပြောဆိုရန်ကြိုးစားကြည့်ပါ, ဆွေးနွေးချက်, ဆွေးနွေးချက်.
ထိုသို့သောထွက်သွားကြဖို့ဘယ်အရပ်အဖြစ်သေးငယ်သောအရာတို့ကိုရှိမရှိ, အဘယ်အရပ်စားရန်, စသည်တို့ကို … အသက်ရှင်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်တူသို့မဟုတ်ပိုကြီးကိစ္စများ, အတူတကွနေထိုင်သို့မဟုတ်လက်ထပ်ဖို့ဖြစ်စေကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုမကြွင်းကြီးမားတဲ့ဆက်ဆံရေးကပြဿနာဖြစ်ပါတယ်လေးတွေရှိသည်ဖြစ်စေမ. ငါတို့သည်တလုံးတကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာ၌အထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူနေသောကြသောအခါတောင်မှကျနော်တို့နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘဝအသက်တာထွက်လှည့်ကြည့်ရှုမည်သို့အစီအစဉ်များဖြစ်သောကြောင့်ကတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားတွင်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်. ကျွန်ုပ်တို့ဘာလိုချင်သိမ်းယူမှုအဖြစ်သူတို့ကိုမြင်ကျနော်တို့ထဲမှာချုပ်ထားလျှင်ဤအဘို့ထိုသူတို့နေသည်ဟုမြင်ကြောင်းတင်ပြလေ့ကြောင့်ဒီပွတ်တိုက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်. သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်သည်နောက်တဖန်စကားပြောကောင်းသော်လည်းသင်တို့သည်လည်းထိုသူတို့လိုချင်တာတွေကိုလေးစားမှုရှိဖို့လိုအပ်, e.g. မင်္ဂလာဆောင်သူတို့ဘယ်မှာကဲ့သို့အမှုအရာမမြင်မိပါဘူးအတူတကွနေထိုင်လိုသူတစ်ဦးသည်လူတစ်ဦးမှအတူတကွနေထိုင်နေထက်သာလွန်သောနှင့်ပိုပြီးသင့်လျော်ကြောင်းထင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားချင်တဲ့သူတွေကိုအများကြီး. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုချင်တယ်, မဟုတ် “ပိုကောင်း” အမှုအရာများနှင့်သည်ကိုထိုအခါသတိရသို့မဟုတ်အခြားလူများကသင့်ကိုထွက်သွားသို့မဟုတ်တောင်မှသူတို့မှန်သည်ထင်တဲ့လမ်းကိုဖိနှိပ်နေကြတယ်ခံစားရရန်လိုအပ်သည်. အပေးအယူကဒီမှာစသော့ချက်ဖြစ်သည်. သင်သည်မည်သည့်ဆက်ဆံရေးတွင်ယခုလိုအပ်ပါတယ်. ကိုယ့်ကြောင့်သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုချင်းစီအပေါ်ပြုအန္တရာယ်မကျရောက်စေ၏တန်းတူငွေပမာဏင်သေချာ.
ဟုဆိုကြနှင့်ဆက်ဆံရေးကြောင့်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်ကိုစောင့်ရှောက်စေတဲ့အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်အဖြစ်ကိုငွေမကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြစ်ဖြစ်ခြင်း. ကျနော်တို့ recessional ကာလ၌နေထိုင်ပြီးအလုပ်အကိုင်တွေမကြာခဏမရရှိနိုင်. လူတွေကရုန်းကန်နေကြသည်ကိုသာကိုသဘာဝမူသောသင်တို့အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာအာရုံစိုက်ထားနိုင်ပါတယ်. သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်အချင်းချင်းအားပေးဖြစ်ပါတယ်, နောက်ဆုံးမှာသင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်တို့အားအခြားဘက်ခြမ်းကိုထုတ်လာနိုင်သည်အတူတကွအချင်းချင်းအတွက်ယုံကြည်အချင်းချင်းပြသကြောင်းကို၎င်း,. သို့သော်ထိုအတောအတွင်းတွင်သင်သည်ဤလောက၌ရှိအများဆုံးကိုချစ်လူတစ်ဦးဘာမှမဖြေရှင်းပေးမယ့်သည်နှင့်အတူငြင်းခုံ. ဘာမှပါကသာအမှုအရာတစ်ဦးသန်းဆပိုမိုဆိုးရွားစေလိမ့်မယ်.
အရက်စွဲလမ်းမှု & စီးပွားပျက်ကပ်
သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သောဆင်းရဲခြင်း ebbs မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကြည့်ရှုသည့်အခါဤအဘယ်သို့ပြုမည်နည်းသိရန်မည်သူမဆိုအဘို့အခက်ခဲပြဿနာများဖြစ်ပါသည်. ဘဝအသက်တာများလွန်းကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့လူတချို့အတွက်လူတိုင်းကိုအခြားသူများထက် သာ. ကောင်း၏အောင်မြင်နိုင်ပါသည်. သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်သောသူတို့အဘို့မရှိရဖြစ်, သင်အားဖြင့်ဆွဲထုတ်ခြင်းငှါသူတို့အထဲ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်နှင့် ပို. ပင်ဆင်းတို့သည်ယခုပင်ထက်ငါဖြစ်စေမည်မူသောသင်တို့အဦးခေါင်းထိပ်ဖြတ်သဘောထားမှတ်ချက်မဆိုသူတို့ကိုပြ.
3 တစ်ဦးကပထမဦးစွာနေ့စွဲတွင်သင့် Puppy ကိုမယူအကြောင်းပြချက်